वडाअध्यक्ष बिरुद्ध सार्वजनीक मुद्धा दर्ता
काठमाण्डौं । कार्तिक ७ । सर्वसाधारणलाई कुटपीट गरेको आरोपमा एक जना वडा अध्यक्ष बिरुद्ध सार्वजनीक मुद्धा दर्ता भएको छ । ओखलढुङ्गाको मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिका–६ थाक्लेका वडाध्यक्ष हेमराज राईविरुद्ध
नेपाल प्रहरीका १७ डिआइजीको पदस्थापन तथा सरुवा, कस्को सरुवा कहाँ ? प्रहरी प्रवक्तामा सुवेदी
रबिन थपलिया । काठमाण्डौं । कार्तिक ६ । नेपाल प्रहरीका ६ जना प्रहरी नायब महानिरिक्षक (डिआइजी)को सरुवा तथा ११ जना डिआइजीको पदस्थापन गरिएको छ । मन्त्री
काठमाडौँ, ६ कात्तिक गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) का मध्यपूर्व संयोजक आरके शर्मा कतारमा आज पक्राउ परेका छन् । संयोजक शर्मालाई कतार प्रहरीले पक्राउ गरेको एनआरएनएका प्रवक्ता भूषण
लहान,कात्तिक ६ । देशका विभिन्न स्थानमा भएको सवारी दुर्घटनामा चार जनाको मृत्यु भएको छ । पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत सिरहाको गोलबजार नगरपालिका–७ पुरानो चोहर्वामा दुई मोटरसाइकल ठोकिँदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ
बाजुरा, कात्तिक ६ । पुरानो चिन्तन भएका धामीझाँक्रीका लागि गौमूल गाउँपालिकाले धार्मिक तथा सांस्कृतिक सचेतनाका लागि अध्ययन भम्रण तय गरेको छ । धार्मिक तथा सांस्कृतिक धरोहरका रूपमा परिचित क्षेत्रको अध्ययन
धनगढी, कात्तिक ६ । कैलाली जिल्लामा गएको आर्थिक वर्ष २०७४÷७५मा दर्ता भएका ९०३ नयाँ उद्योगमा झण्डै रु एक अर्ब ३८ करोड लगानीको प्रस्ताव गरिएको छ । दर्ता भएकामध्ये साना उद्योगमा
– नारायण ढु्ङ्गाना काठमाडौँ, कात्तिक ६ । लोकसेवा आयोगको एक सय बढी प्राविधिक पदमा दरखास्त नै पर्न सकेको छैन । गत वर्ष कूल विज्ञापनमध्ये १०१ विज्ञापनमा दरखास्त नपरेको लोकसेवा आयोगका
काठमाडौँ, कात्तिक ६ । धितोपत्र बजारमा आज शेयरको मूल्यमा सामान्य अङ्कले घटेको छ । कारोवार मापक नेप्से परिसूचक ३ दशमलब ४८ विन्दुले घटेर एक हजार २४१ दशमलब ६ विन्दुमा
काठमाडौँ, कात्तिक ६ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सशस्त्र प्रहरी बल धनुषाका प्रहरी सहायक हवल्दार चन्देश्वर गिरीलाई रु ११ हजार घुस लिएको अभियोगमा आज पक्राउ गरेको छ । नेपाल भारत
उडिरहेको माउन्टेन एयरको हेलीकप्टरको पाङखानै भाँच्चीएपछि..........
सोलुखुम्बु, ६ । कात्तिक तेञ्जिङ हिलारी विमानस्थल लुक्लामा माउण्टेन एयरको हेलिकप्टरमा क्षति भएको छ । विमानस्थलमा अवतरण गरिएको उक्त हेलिकप्टरको आफ्नै पङ्खाले पुच्छरमा लाग्दा क्षति भएको
हिलिहाङ, पाँचथर, ६ कात्तिक (रासस) ः दशैँको समयमा पाँचथरमा पेट्रोलको अभाव भएको छ । दशैँ अगाडिनै आयात भएको पेट्रोल यसअघिनै सकिएको थियो । यसबाट आफन्तकोमा टीका लगाउन
नवलपरासी, ६ कात्तिक (रासस) ः पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत पूर्वी नवलपरासीको मध्यबिन्दु नगरपालिका–११ अरुणखोलामा आइतबार बिहान भएको बस दुर्घटनामा परी मृत्यु हुनेको सङ्ख्या सात पुगेको छ । दुर्घटनामा गम्भीर
पिङ खेल्ने क्रममा लडेर मृत्यु
सिन्धुली, ५ कात्तिक । कमलामाई नगरपालिका-६ राममाडी बस्ने सुबोध नेपालीकी ५ वर्षीया छोरी रिषा नेपालीको सोमबार पिङ खेल्ने क्रममा लडेर मृत्यु भएको छ । सोही स्थानमा रहेको
नवलपरासी, ५ कात्तिक (रासस) ः एक सिङ्गे गैँडाको संरक्षण गर्न सचेतना जगाउनका लागि पूर्वी नवलपरासीमा कात्तिक १५ देखि २९ गतेसम्म राइनो संरक्षण गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिता २०७५
–प्रकाश सिलवाल काठमाडौँ, ४ कात्तिक (रासस) ः नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)को आजको सचिवालय बैठकले प्रतिनिधिसभाका सांसद रामवीर मानन्धरले सांसद पदबाट राजीनामा दिन नपर्ने निर्णय गरेसँगै हाललाई उपनिर्वाचनको बहस
कपिलवस्तु, ५ कात्तिक (रासस) ः दुर्गा भवानीको मूर्ति सेलाउने क्रममा कपिलवस्तुको कृष्णनगरमा विवाद हँुदा कपिलवस्तु प्रशासनले आइतबारदेखि कफ्र्यु लगाएको छ । शुक्रबारदेखि कृष्णनगर तनावग्रस्त बनेको थियो ।
प्रधानमन्त्रीले भोली सम्म सर्वसाधारणलाई दशैंको टिका लगाउने, टिका लगाउन यति बेला पुग्नुहोस
काठमाण्डौं । कार्तिक ५ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भोली कार्तिक ६ गते सम्म सर्वसाधारणलाई दशैंको टिका लगाइदिने भएका छन् । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा
मूर्ति सेलाउने बिषयमा बिबाद हुँदा कपिलवस्तुमा अनिश्चितकालीन कफ्र्यु
काठमाण्डौं । कार्तिक ४ । दुर्गा भवानीको मूर्ति सेलाउने बिषयमा बिबाद हुंदा कपिलवस्तुमा अनिश्चीत कालीन कफ्र्यु लगाइएको छ । कपिलवस्तुको कृष्णनगरमा विवाद हुँदा कपिलवस्तु जिल्ला प्रशासन कार्यालयले
नक्कली नोट छाप्ने मेसिन सहित ५ जनाको गिरोह पक्राउ
काठमाडौं, ४ कात्तिक . नक्कली नोट छाप्ने गिरोहका ५ जनालाई नेपाली नक्कली नोट छाप्ने मेसिन, नेपाली नक्कली नोट र सोको लागि प्रयोग हुने विभिन्न सामाग्री सहित
दशैँपछि राजधानीमा चहलपहल सुरु,दशैंमा बढी भाडा असुलगर्ने ५१५ भन्दा बढी सवारीलाई कारवाही
काठमाडौँ, ४ कात्तिक (रासस) ः दशैँपछि राजधानीमा यातायात र मानिसको चहलपहल क्रमशः बढ्न थालेको छ । दशैँको फूलपातीदेखि सुनसानप्रायः बनेको काठमाडौँ उपत्यकाबाट चाड मनाउन गएका मानिस फर्कन
काठमाडौं ३० असोज । प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा विभिन्न राजनीतिक दलका अधिकांश शीर्ष नेताले काठमाडौंमै दसैं मनाउने भएका छन् । दसैं मनाउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी
नेपाल प्रहरीले काठमाण्डौंमा अस्टमी देखि टिकाको दिन सम्म निशुल्क बस सञ्चालन गर्ने, कहाँ कहाँ चल्छ बस ? रुट सहित
काठमाण्डौं । असोज ३० । नेपाल प्रहरीले महाअष्टमी, नवमी र टिकाको दिन काठमाण्डौं उपत्यकामा निशुल्क बस सञ्चालन गर्ने भएको छ । निशुल्क बसहरु बिहान ११ बजे
थाहा पाइराख्नुहोस IVR मार्फत नेपाल टेलिकमको निशुल्क पाईने सुबिधाहरु
दशैं पछि माथिल्लो तामाकोशीको रु एक अर्ब ५८ करोडको आइपिओ आउँदै
काठमाडौँ, २९ असोज ः राष्ट्रिय गौरव आयोजनाको रुपमा रहेका माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाले सर्वसाधारणलाई साधारण शेयर (आइपिओ) आगामी कात्तिक १५ गतेदेखि बिक्री गर्ने भएको छ । आयोजनाले
बनेपा, २९ असोज (रासस) ःसवारी दुर्घटनामा परी एकै परिवारका तीन जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्युहुनेमा दोलखा सैलुङ गाउँपालिका–७ का ३५ वर्षीय सोनाम लामा, उहाँकी श्रीमती ३०
Pages 484 : You are at page 304 of 484